Archives trial - US Ilungelo Lokwazi
Inkantolo iyakwenama ukuhlawuliswa kukaBayer okuhlongozwayo ngezigaba
Ijaji likahulumeni ngoMsombuluko belinamagama ahlabayo ngohlelo lukaBayer AG lokulibazisa amacala omdlavuza weRoundup angaba khona kanye nokuvimba izivivinyo zamajaji, egxeka isiphakamiso esingajwayelekile esenziwe yiBayer neqembu elincane labameli babamangali njengokuthi kungenzeka kube kungahambisani nomthethosisekelo.
“INkantolo iyakungabaza ukufaneleka nokulunga kwalesi sivumelwano esihlongozwayo, futhi ithambekele ekuphikiseni lesi sicelo,” kufundeka umyalelo wokuqala okhishwe yiJaji uVince Chhabria weNkantolo yesiFunda sase-US esiFundeni esiseNyakatho neCalifornia. Isikhundla sejaji sibukeka siyishaya ngamandla iBayer nemizamo yenkampani yokuxazulula ifa lamacala abhekene neMonsanto, iBayer eyathenga eminyakeni emibili eyedlule.
Abantu abangaphezu kwe-100,000 e-United States bathi ukuvezwa kwe-Monsanto's glyphosate-based Roundup herbicides kubangele ukuthi bathuthukise i-non-Hodgkin lymphoma (NHL) nokuthi iMonsanto kudala yazi futhi yafihla izingozi zomdlavuza.
Izilingo ezintathu zamajaji ziye zabanjwa eminyakeni emibili eyedlule kanti iMonsanto yalahlekelwa yibo bobathathu ngamajaji anikezela ngaphezu kuka- $ 2 billion kumonakalo. Wonke amacala manje asedlulisiwe futhi iBayer ibilokhu ihilizisana ukugwema ukuqulwa kwecala labasizi besikhathi esizayo.
Ngenyanga edlule iBayer ithe ikwenzile izivumelwano ezifinyelelwe ukuxazulula iningi lamacala afakwe njengamanje futhi abhale uhlelo lokusingatha amacala okungenzeka ukuthi azofakwa ngokuzayo. Ukusingatha le nkantolo njengamanje uBayer uthe kuzokhokha imali efinyelela ku- $ 9.6 billion ukuxazulula cishe amaphesenti angama-75 ezicelo zamanje futhi uzoqhubeka nokusebenza ukuxazulula okusele.
Ehlelweni lokusingatha amacala angaba khona esikhathi esizayo, IBayer ithe isebenzisana neqembu elincane labameli babamangali abamele ukwenza imali engaphezu kwamaRandi ayizigidi ezingama-150 ngenhloso yokuvumelana “nokuma” kweminyaka emine emacaleni okufaka amaphepha. Lolu hlelo luzosebenza kubantu abangatholwa ngokuzayo nge-NHL abakholelwa ukuthi kungenxa yokuchayeka kwe-Roundup. Ngokuphikisana nokukhokhwa kukaMonsanto ngamacala asalindile, ukukhokhelwa kwalesi senzo esisha "sekusasa" kudinga ukuvunywa yinkantolo.
Ngaphezu kokubambezela izivivinyo eziningi, isivumelwano sidinga ukuthi kusungulwe “iphaneli lesayensi” elinamalungu amahlanu elizothatha noma ikuphi okutholakele esikhathini esizayo ngezimangalo zomdlavuza ezandleni zamajaji. Esikhundleni salokho, kuzokwakhiwa i- “Class Science Panel” ezonquma ukuthi ngabe i-Roundup ingadala i-non-Hodgkin lymphoma, futhi uma kunjalo, ngamazinga aphansi okuvezwa. IBayer izokwazi ukuqoka amalungu amabili kwamaphaneli amahlanu. Uma ngabe iphaneli linqume ukuthi akukho ukuxhumana okuyimbangela phakathi kwe-Roundup ne-non-Hodgkin lymphoma lapho-ke amalungu ekilasi azovinjelwa ekufuneni okuzayo esikhathini esizayo.
Amalungu amaningana ezinkampani zabameli abahola phambili abawine izivivinyo ezintathu zomdlavuza weRoundup aphikisana nohlelo oluhlongozwayo lokuxazulula izinyathelo, bethi luzophuca abamangali besikhathi esizayo amalungelo abo ngenkathi kunothisa idlanzana labammeli abebengakaze babe phambili ecaleni leRoundup.
Lolu hlelo ludinga ukuvunywa kweJaji uChhabria, kodwa umyalelo okhishwe ngoMsombuluko ukhombise ukuthi akahlelile ukunikeza imvume.
“Endaweni lapho isayensi ingahle ithuthuke, bekungafaneleka kanjani ukukhiya i-
isinqumo esivela eqenjini lososayensi kuwo wonke amacala azayo? ” kubuza ijaji ngokulandelana kwalo.
Ijaji lithe lizobamba ukulalelwa ngoJulayi 24 ngesicelo sokuphasiswa kokuqala kokuxazululwa kwesenzo sabantu abasesigabeni. "Uma kubhekwa ukungabaza kweNkantolo njengamanje, kungaphikisana nentshisekelo yawo wonke umuntu ukubambezela ukulalelwa kwamacala ngaphambi kokuthola imvume yokuqala," ubhale kanjalo.
Ngezansi kwengcaphuno yomyalo wejaji:
I-Monsanto Roundup Trial Tracker Bayer, California, umdlavuza, isenzo sesigaba, izinkantolo, EPA, Ukudla, glyphosate, icala, Monsanto, i-non-Hodgkin lymphoma, RoundUp, isayensi, ukuhlala, Isivivinyo
Inkulumo entsha ngokuxazululwa phakathi kweziguli zomdlavuza waseBayer neRoundup
Posted on Kwangathi 26, 2020 by UCarey Gillam
Kube nenkulumo evuselelwe mayelana nokuxazululwa okungaba khona kuleli sonto phakathi kweBayer AG kanye neziguli ezingamashumi ezinkulungwane zeziguli ezinomdlavuza njengenkantolo ebalulekile yokulalelwa kwenkantolo ngesonto elizayo.
Ngokombiko othile umbiko eBloomberg, abameli beBayer bafinyelele esivumelwaneni ngomlomo nabameli base-US abamele okungenani abamangali abangama-50,000 XNUMX abamangalela uMonsanto ngenxa yezimangalo zokuthi iRoundup namanye ama-herbicides aseMonsanto adale ukuthi abamangali bahlakulele i-non-Hodgkin lymphoma.
Imininingwane njengoba ibikwe yiBloomberg ibonakala ingashintshiwe kuzivumelwano zomlomo zangaphambilini phakathi kweBayer kanye nabameli babamangali abawa ngesikhathi kuvalwa inkantolo ehlobene neCoronavirus. Njengoba izinkantolo zisavaliwe, izinsuku zokuqulwa kwecala zihlehlisiwe, kwasusa ingcindezi eBayer.
Kepha iphuzu elisha lengcindezi lisondela ekulalelweni kwesonto elizayo ekukhalazweni kwesilingo sokuqala somdlavuza weRoundup. Inkantolo Yokudlulisa Amacala yaseCalifornia Isifunda Sokuqala Sokudlulisa Amacala kulindeleke ukuba ilalele izimpikiswano ngomlomo lapho kudluliswa amacala ecaleni likaJohnson v Monsanto ngoJuni 2.
Leli cala, elalixabanisa onogada baseCalifornia uDewayne “Lee” Johnson neMonsanto, kuholele kumklomelo wokulimala ongu- $ 289 million likaJohnson ngo-Agasti 2018. Ijaji alitholanga nje kuphela ukuthi i-Roundup kaMonsanto kanye nemikhiqizo ehlobene ne-glyphosate yethule ingozi enkulu kubantu abayisebenzisayo, kodwa nokuthi kukhona "ubufakazi obucacile nobukholisayo" bokuthi izikhulu zikaMonsanto zenze "ngobubi noma ingcindezelo" ukwehluleka ukuxwayisa ngokwanele ngobungozi.
Ijaji lecala ecaleni likaJohnson ngokuhamba kwesikhathi wehlisa umonakalo kuya ku- $ 78.5 million. IMonsanto idlulise ngisho umklomelo owehlisiwe, kanti uJohnson wadlulisa icala efuna ukubuyiselwa umklomelo ophelele wejaji.
In edlulisa isinqumo, UMonsanto ucele inkantolo ukuthi iguqule isinqumo secala bese ifaka isinqumo seMonsanto noma ihlehlise futhi ibuyisele icala ecaleni elisha. Okungenani, uMonsanto ucele inkantolo yokudlulisa amacala ukuthi yehlise ingxenye yomklomelo wamajaji "ngomonakalo ongekho kwezomnotho wesikhathi esizayo" kusuka ku- $ 33 million kuya ku- $ 1.5 million nokusula umonakalo wokujeziswa ngokuphelele.
Abahluleli benkantolo yokudlulisa amacala unikeze umbono omncane mayelana nokuthi bancike kanjani kuleli cala, bazisa abameli bezinhlangothi zombili ukuthi kufanele bakulungele ukuxoxa ngodaba lokukhokhwa kwemali enkantolo eyalalelwa ngoJuni 2. Abameli bakammangali bakuthathe lokho njengophawu olukhuthazayo lokuthi kungenzeka amajaji angahleleli ukuhlelelwa kwecala elisha.
Ngaphansi kwemibandela yokukhokhelwa okuxoxwe ngakho ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, iBayer izokhokha isamba esingu- $ 10 billion ukuletha ukuvalwa kwamacala aphethwe amafemu amakhulu amakhulu, kepha angavumi ukufaka amalebula okuxwayisa kukhula lwayo olususelwa e-glyphosate ababulali, njengoba bekufunwe abanye babameli babamangali.
Isivumelwano ngeke sihlanganise bonke abamangali ngezimangalo ezisalindile. Futhi bekungeke kumboze uJohnson noma abanye abamangali abathathu asebevele bawine izimangalo zabo ecaleni. IMonsanto neBayer badlulisele phambili konke ukulahleka kwecala.
Abameli ezinkampanini ezinkulu ezithinteka enkantolo banqabile ukuxoxa ngesimo esikhona manje.
Izikhulu zeBayer ziphikile ukuthi abukho ubufakazi besayensi obuxhumanisa umuthi wokubulala ukhula we-glyphosate nomdlavuza, kodwa abatshalizimali bebelokhu befuna ukuthola isivumelwano sokuxazulula leli cala. Kungaba wusizo kuBayer ukuxazulula amacala ngaphambi kwanoma yisiphi isinqumo esibi senkantolo yokudluliswa kwamacala, esingahle siphazamise abaninimasheya benkampani. IBayer ithenge iMonsanto ngoJuni ka-2018. Ngemuva kokulahleka kwecala likaJohnson ngo-Agasti 2018, intengo yamasheya enkampani yehle kakhulu futhi isalokhu inengcindezi.
Amacala okuqala enkantolo yamacala omdlavuza weRoundup afakwa ngasekupheleni kuka-2015, okusho ukuthi abamangali abaningi bebelinde iminyaka ukuthola isinqumo. Abanye babamangali bafe besalindile, kanti amacala abo manje aqhutshelwa phambili ngamalungu omndeni ekhungathekile ngokungabi nenqubekela phambili ekuqedeni amacala.
Abanye abamangali bebelokhu benza imiyalezo yevidiyo ebhekiswe kubaphathi beBayer, befuna ukuthi bavumelane nezindawo zokuhlala futhi benze izinguquko zokuxwayisa abathengi ngezingozi zomdlavuza ezingaba khona zemithi yokubulala ukhula eseglyphosate efana neRoundup.
UVincent Tricomi, 68, ungomunye wommangali onjalo. Kwi-video ayenzile, ayihlanganyele ne-US Right to Know, uthe usehlinzwe ngemizuzu engu-12 yokwelashwa ngamakhemikhali kanti uhlala ezinhlanu esibhedlela elwa nomdlavuza wakhe. Ngemuva kokuthola ukuthethelelwa kwesikhashana, umdlavuza uphinde wabuya ekuqaleni konyaka, esho.
“Baningi kakhulu njengami abahluphekayo futhi abadinga ukukhululeka,” kusho uTricomi. Buka umyalezo wakhe wevidiyo ngezansi:
I-Monsanto Roundup Trial Tracker ezolimo, Bayer, Bayer AG, izinkantolo, imvelo, EPA, ukulima, FDA, Ukudla, glyphosate, zezempilo, ukhula, Monsanto, izibulala-zinambuzane, RoundUp, isayensi, Isivivinyo, umbulali wokhula
Ukudluliswa kwesilingo sokuqala somdlavuza seMonsanto Roundup kuzozwakala ngoJuni
Posted on April 9, 2020 by UCarey Gillam
Inkantolo yokudlulisa amacala yaseCalifornia isethe ukulalelwa kwangoJuni ngokudluliswa kwamacala okuvela ecaleni lokuqala ngqa mayelana nezinsolo zokuthi imishanguzo yokubulala ukhula kaMonsanto ibangela umdlavuza.
INkantolo Yokudlulisa Amacala Yesifunda Sokuqala Sokudluliswa Kwamacala eCalifornia ithe ngoLwesine ihlela ukulalelwa kwecala ngoJuni 2 ecaleni likaDewayne “Lee” Johnson v. Monsanto. Ukulalelwa kwamacala kuzokwenzeka cishe eminyakeni emibili ngemuva kokuqala kokuqulwa kwecala likaJohnson kanye neminyaka emibili ngemuva kokuthi iBayer AG ithenge iMonsanto.
Ijaji elivumelanayo unikeze uJohnson u- $ 289 million ngo-Agasti 2018, kufaka phakathi amaRandi ayizigidi ezingama-250 kumonakalo wokujeziswa, ukuthola ukuthi akukhona nje kuphela ukuthi i-Monsanto's glyphosate-based herbicides yenze ukuthi uJohnson athuthukise i-non-Hodgkin lymphoma, kepha nokuthi inkampani ibazi ubungozi bomdlavuza futhi yehluleka ukuxwayisa uJohnson.
Lapho ilungiselela izimpikiswano ngomlomo mayelana nesikhalazo sikaJohnson, inkantolo yokudluliswa kwamacala ithe iyasichitha isicelo esenziwe yiCalifornia Attorney General sokuthi kufakwe isikhalazo se-amicus ngasohlangothini lukaJohnson.
Imibhalo yangaphakathi ibuye ikhombise ukuthi iMonsanto ibilindele ukuthi i-International Agency for Research on Cancer ihlukanise i-glyphosate njenge-carcinogen yabantu okungenzeka noma okungenzeka ngo-Mashi ka-2015 (ukuhlukaniswa kwaba njenge-carcinogen okungenzeka kube khona) futhi bahlela uhlelo kusengaphambili lokuhlambalaza ososayensi bomdlavuza.
Ukubeka usuku lokudlulisa icala kukaJohnson, inkantolo yokudluliswa kwamacala ithe “iyabona ukuthi lawa macala ahlanganisiwe athatha isikhathi kangakanani futhi iqhubekile nokuwabeka eqhulwini naphezu kwezimo eziphuthumayo zamanje” ezidalwe ukusabalala kwe-coronavirus.
Ukunyakaza kwenkantolo yokudluliswa kwamacala ecaleni likaJohnson kuza njengoba kubikwa iBayer ngizama ukuziqinisa ezindaweni zokuhlala okuxoxiswene ngazo namafemu abameli baseMelika abamele abaningi balabo bamangali.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker UBaum Hedlund, Bayer, California, umdlavuza, inkantolo, Ukudla, glyphosate, zezempilo, Lee Johnson, Monsanto, izibulala-zinambuzane, RoundUp, isayensi, Isivivinyo
Isilingo somdlavuza waseSt. Louis Roundup sisethwe kabusha ngoLwesithathu njengoba icala laseCalifornia limisiwe
Posted on January 31, 2020 by UCarey Gillam
Idrama iyaqhubeka empini ebhekwe ngabomvu phakathi kwabameli abavikela iMonsanto Co yangaphambili nalabo abamele izinkulungwane zezisulu zomdlavuza abathi bachayeka kwi-Roundup herbicide kaMonsanto abanikeze yona noma ilungu lomndeni elingeyona iHodgkin lymphoma.
NgoLwesihlanu, icala laseCalifornia lahlehliswa ngokusemthethweni ngemuva kwesikhathi esingaphezu kwesonto lemisebenzi yokukhetha amajaji nokuhlala abahluleli abangu-16. Esikhundleni sokuqhubeka nezitatimende zokuvula, lelo cala manje selihlehliselwe unomphela, nengqungquthela yokuphathwa kwamacala ebekelwe uMashi 31.
Khonamanjalo, icala labamangali abahlehlisiwe ngaphambi nje kokuvula izitatimende ngesonto eledlule eSt. Louis lihlelelwe ukuthi livulwe ngoLwesithathu oluzayo, kusho imithombo esondelene necala.
Isilingo saseSt. Inethiwekhi Yokubuka Inkantolo nangokuphakelwa kweziteshi zethelevishini nezomsakazo. Abameli bomnikazi weMonsanto waseGerman uBayer AG baphikisana nokusakazwa kwecala, bethi lokhu kuduma kubeka engcupheni abaphathi babo nofakazi.
Izilingo eziningana zikhishwe edokodweni emasontweni ambalwa edlule njengoba iBayer, eyathenga iMonsanto e2018, isisondele ekuxazululeni umhlaba wonke okulingana nezicelo ezingaphezu kuka-50,000 100,000 - ezinye izilinganiso zingaphezu kuka-10. IBayer ifuna ukukhokha cishe ama- $ XNUMX billion ukukhokhela lezi zimangalo, ngokusho kwemithombo esondele ezingxoxweni.
Amacala onke asola ukuthi iMonsanto yayilwazi kahle ucwaningo lwesayensi olukhombisa ukuthi kunezingozi zezempilo zabantu eziboshelwe kumakhemikhali okubulala ukhula e-glyphosate kodwa ayenzanga lutho ukuxwayisa abathengi, yasebenza esikhundleni sokukhohlisa irekhodi lesayensi ukuvikela ukuthengiswa kwezinkampani.
Abatshalizimali beBayer banesifiso sokuthi inkampani iqede ukuthethwa kwamacala futhi isuse izivivinyo eziningi nokwaziswa okulethwa yilowo nalowo. Abameli bakaBayer kubikwe ukuthi baxoxisene ngamakhasimende ezinkampani ezinkulu ezinkulu, kepha behluleka ukufinyelela esivumelwaneni namafemu amakhulu wabamangali - iMiller Firm yaseVirginia neWeitz & Luxenberg yaseNew York. Inkampani iMiller imele abamangali emacaleni womabili aseCalifornia asanda kukhishwa edokodweni kanti ecaleni laseSt.
Amasheya akhuphuke ngesonto eledlule lapho icala laseSt. abameli.
Ukuhlehliswa kwalolu daba kubakhungathekisile ababukeli, okubalwa nabasebenzi beCourtroom View View Network, abasale enkantolo kuleli sonto belinde izindaba zokuthi icala lingaphinda liqale nini. Batshelwe ngoLwesihlanu ekuseni kuphela ukuthi leli cala ngeke lisaqhubeka ngoMsombuluko. Bafunda ngokuhamba kwesikhathi ukuthi kuzoqhubeka ngoLwesithathu esikhundleni.
Izilingo ezintathu zokuqala zamhambela kabi uMonsanto noBayer njengamajaji athukuthele unikezwe ngaphezulu kwe- $ 2.3 billion ekulimaleni kwabamangali abane. Amajaji wecala ehlise imiklomelo yamajaji yabalelwa ezigidini ezingama-190 zamadola, futhi bonke baphansi kwesikhalazo.
Lezo zivivinyo zavula amehlo omphakathi amarekhodi angaphakathi eMonsanto lokho kubonisa ukuthi iMonsanto yawafaka kanjani amaphepha esayensi amemezela ukuphepha kwemithi yokubulala ukhula yayo ebonakala ngokungeyikho ukuthi yadalwa kuphela ngososayensi abazimele; wasebenzisa abantu besithathu ukuzama ukudicilela phansi ososayensi ababika ingozi nge-glyphosate herbicides; futhi ibambisene nezikhulu ze-Environmental Protection Agency ukuvikela isikhundla sikaMonsanto sokuthi imikhiqizo yayo ayibanga umdlavuza.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker Bayer, EPA, Ukudla, glyphosate, Monsanto, RoundUp, isayensi, Isivivinyo